Tafio-drivotra ary ahoana ny endriny | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Inona no atao hoe tafio-drivotra ary manao ahoana ny endrik'izany
Tiako ny tafiotra. Rehefa rakotry rahona Cumulonimbus ny lanitra dia tsy afaka ny tsy hahatsapa ho mahafinaritra aho, saika mitovy amin'ilay tsapan'ireo izay tia ny Masoandro rehefa mitondra ny mpanjaka kintana izy ireo amin'ny andro maro.
Raha tianao koa izy ireo, dia azo antoka fa ho liana ianao amin'ny famakiana izay rehetra holazaiko anao manaraka. Jereo hoe inona ilay oram-baratra, ny endriny ary maro hafa.
1 Inona ny tafio-drivotra?
2 Ahoana ny fomba famoronana azy?
3.2 Fasika na vovoka
3.3 Ny oram-panala na havandra
3.4 Ny amin'ny zavatra sy ny zavamananaina
Inona ny tafio-drivotra?
Ny tafio-drivotra dia tranga iray miavaka amin'ny fisian'ny mason-drivotra roa na maromaro izay amin'ny hafanana samihafa. Io fahasamihafana io dia mahatonga ny atmosfera tsy ho marin-toerana, miteraka orana, rivotra, varatra, kotrokorana, tselatra ary indraindray koa havandra.
Na dia nofaritan'ny mpahay siansa ho toy ny rahona aza ny tafio-drivotra afaka mamoaka kotroka, Misy fisehoan-javatra hafa antsoina koa hoe toy izany, izay misy ifandraisany amin'ny orana, ranomandry, havandra, herinaratra, lanezy, na rivotra mahery izay afaka mitondra zana-kazo amin'ny fampiatoana, zavatra na zavamananaina mihitsy aza.
Raha miresaka ny mampiavaka azy isika, tsy isalasalana fa tsy maintsy hiresaka momba ny rahona mitombo mitsangana izay mamokatra. IRETO afaka hahatratra haavo mahavariana izy ireo: manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 17km. Eo no misy ny tropopause, izay faritry ny tetezamita eo amin'ny troposfera sy ny stratosfera.
Ny tsingerin'ny hetsika ataon'ny tafio-drivotra dia matetika manana dingana voalohany amin'ny famolavolana, dingana eo anelanelan'ny fahamatorana ary dingana farany amin'ny fahalovana izay maharitra iray na roa ora. Fa amin'ny ankapobeny misy sela convective maromaro izay mitranga miaraka, noho izany dia mety haharitra andro maromaro ilay fisehoan-javatra.
Indraindray tafio-drivotra afaka mivoatra amin'ny fanjakana supercell, izay tafiotra mahery. Izy io dia afaka manomboka andiam-pisondrotana miakatra sy midina ary orana be dia be. Izy io dia toy ny oram-baratra tonga lafatra 😉. Amin'ny alàlan'ny fisian'ny vortices an'habakabaka maromaro, izany hoe, rivotra mihodina manodidina ny afovoany, dia afaka mamokatra rano sy tadio.
Ahoana ny fomba famoronana azy?
Mety hisy tafio-drivotra miforona ny rafitra fanerena ambany dia mila manakaiky ny tsindry avo iray. Ny voalohany dia hanana maripana ambany, raha mafana kosa ny iray. Ity mifanohitra hafanana ity sy ireo toetra hafa ananan'ny besinimaro mando nipoitra ny fivoaran'ny fiakarana sy ny fiakarana mamokatra ny vokany izay tena tiantsika be, na ny mifanohitra amin'izay, ny tsy fankasitrahana toy ny oram-be na ny rivotra, nefa tsy manadino ny famoahana herinaratra. Ity fivoahana ity dia miseho rehefa tratra ny herin'ny rivotra, ary amin'izay dia miteraka herinaratra. Avy aminy, raha toa ka marina ny fepetra, dia mety hipoitra ny varatra sy ny kotrokorana.
Na dia niforona bebe kokoa na latsaka tamin'ny fomba mitovy aza ny rehetra, miankina amin'ny toetrany dia afaka manavaka karazana maro isika. Ny tena zava-dehibe dia:
Tranga iray izay miavaka amin'ny fisian'ny tselatra sy kotroka, izay ireo feo avoakan'ny voalohany. Avy any rahona Cumulonimbus izy ireo, ary miaraka amin'ny rivotra mahery, ary indraindray oram-be, oram-panala na havandra.
Fasika na vovoka
Tranga iray miseho any amin'ny faritra maina sy tsy dia maina manerantany. Ny rivotra dia mamindra sombin-javatra betsaka amin'ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 40km / ora, afaka mamita amin'ny kaontinanta lavitra be.
Ny oram-panala na havandra
Tafio-drivotra izy ka milatsaka amin'ny rano ny oram-panala na orana. Miankina amin'ny tanjany dia afaka miresaka momba ny oram-panala na osa isika. Rehefa miaraka amin'ny tafiodrivotra sy ny havandra izy dia antsoina hoe oram-panala.
Tranga mahazatra matetika izy io mandritra ny ririnina any amin'ny faritra avo be, satria fahita matetika ny fanala any amin'ireo faritra ireo.
Ny amin'ny zavatra sy ny zavamananaina
Mitranga izany rehefa mitondra trondro na zavatra ny rivotra, ohatra, ary mianjera amin'ny tany izy ireo. Io no tafio-drivotra manaitra indrindra amin'ny rehetra, ary mety ho iray amin'ireo kely indrindra tianay ho hita izy io.
Izy ireo dia rahona be dia be izay mihodina haingana ary hidina ambonin'ny tany, ny ranomasina na ny farihy. Misy karazany roa: tornadic, izay tadio izay niforona teny ambonin'ny rano na tany izay nandalo tao amin'ny medium aqueous, na non-tornadic. Ny fisian'ilay teo aloha dia miankina amin'ny mesocyclone, izay vortex an'habakabaka misy savaivony 2 ka hatramin'ny 10 km izay mipoitra ao anaty tafio-drivotra mahery ka mety hiteraka fahavoazana lehibe amin'ny rivotra maherin'ny 510 km / ora; raha ity farany dia miakatra eo ambanin'ny fototr'ireo rahona cumulus lehibe izy ireo ary tsy dia mahery setra loatra (116km / h ny rivotra mahery indrindra azony.
Izy ireo dia mason-drivotra iray mihodina amin'ny hafainganam-pandeha izay ny tendrony ambany dia mifandraika amin'ny velaran'ny tany ary ny tendrony ambony amin'ny rahona cumulonimbus. Miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana sy ny fahasimbana aterak'izany dia mety ho 60-117Km (F0) na 512 / 612km / h (F6) ny rivotra mahery indrindra.
Fantatrao ve ny tafio-drivotra sy ny fomba niforonany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Inona no atao hoe tafio-drivotra ary manao ahoana ny endrik'izany
Mbola tsy miatrika fiovan'ny toetr'andro i Espana
Maty mosary noho ny fiovan'ny toetr'andro ny lemur volotsangana